ကုမ်ပဏီရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို လူမှုကှနျရကျမှာ မြှဝခေဲ့တဲ့ foodpanda ဝနျထမျး (၃)ဦး အလုပျထုတျခံရ – Myanmar Media
လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ကုမ်ပဏီရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ရေးသားဖျောပွခဲ့တဲ့ foodpanda rider တဈဦးရဲ့ post ကို ကိုယျပိုငျအကောငျ့မှာ ပွနျလညျဝမြှေခဲ့တဲ့
rider (၃)ဦးကို food panda Myanmar ကုမ်ပဏီက အလုပျထုတျလိုကျတယျလို့ အလုပျထုတျခံရတဲ့ ဝနျထမျးတှဆေီကနေ သိရပါတယျ။…
“ လုံးဝအထုတျခံလိုကျရပွီ။ အခုလိုထုတျတာကွီးကတော့ ကြှနျတျောတို့ထမငျးအိုးကိုရိုကျခှဲလိုကျသလိုပဲ။ ခကျြခငျြးကွီး ထုတျတယျဆိုပွီးလုပျတာ။ အမှနျဆို အလုပျစလုပျကတညျးက သူတို့စညျးကမျးခကျြထဲမှာလညျး ပါပွီးသား။
ဝနျထမျးတှေ တဈခုခုအမှားရှိခဲ့ရငျ ပထမအကွိမျ၊ ဒုတိယအကွိမျဆိုပွီး သတိပေးခကျြမြိုးရှိရမှာ၊ အခုဟာက တဈခါတညျးဖွုတျတယျဆိုတာက လုံးဝမဖွဈသငျ့ဘူး။…
လုပျလာခဲ့တဲ့ တလြှောကျလညျး ဘာပွဈခကျြမှမရှိဘူး။ customer တှနေဲ့ ဘာပွဿနာမှမရှိခဲ့ဘူး။ ကြှနျတျောတို့တှေ Facebook မှာ ရေးတငျတယျဆိုတာလညျး တကယျဝနျထမျးတှကွေုံတှနေ့ရေတဲ့အရာတှပေဲ ကနျြတဲ့သူတှမေေးကွညျ့လညျးရတယျ။
ဒါကို ကုမ်ပဏီဘကျက မဖွရှေငျးပေးဘဲ အလုပျထုတျလိုကျတာမြိုးကတြော့ လုံးဝမကနြေပျဘူးဗြာ”လို့ အလုပျထုတျခံလိုကျရတဲ့ rider တဈဦးက Duwun ကို ပွောပါတယျ။…
အလုပျထုတျခံရတဲ့ riderတှအေနနေဲ့ အလုပျထုတျခံရတဲ့ နိုဝငျဘာလ (၁၉)ရကျနကေ့ ကုမ်ပဏီရဲ့ တာဝနျရှိသူနဲ့တှဆေုံ့ဖို့ သှားရောကျတှဆေုံ့ခဲ့ကွပမေယျ့လညျး အလုပျထုတျလိုကျကွောငျး အဖွသောရရှိခဲ့ကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။“
မူရငျး postတငျတဲ့သူက fake အကောငျ့နဲ့ တငျလိုကျတာ။ အဲဒါကို ကြှနျတျောတို့က copyယူပွီး ကိုယျ့အကောငျ့တှမှောပွနျတငျလိုကျကွတာပါ။…အခုထုတျခံရတဲ့ (၃)ယောကျမှာ မူရငျး postတငျတဲ့သူမပါဘူး။ ပွနျကူးတငျတဲ့သူတှပေဲ။
ကြှနျတျောတို့ကလညျး သူတငျထားတာတှကေ ကိုယျ့ခံစားခကျြတှအေတိုငျးပဲ လကျတှလေ့ညျးအဲလိုဖွဈနတောဆိုတော့ အမှနျကိုဖျောပွတဲ့သဘော။ တကယျလညျး ကုမ်ပဏီက ဝနျထမျးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ဘာတာဝနျယူမှုမှမရှိဘူး။…
ကြှနျတျောတို့ riderတှထေဲက တဈခုခုဖွဈတယျဆိုတောငျ riderတှအေားလုံးပဲစုပွီး ကိုယျတကျနိုငျသလောကျ ၁၀၀၀ ဆီစုပွီး ပွနျထောကျပံ့နကွေရတာ။ အခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ ကာလတှတေဈလြှောကျလညျး ဘာမှကူညီထောကျပံ့ခဲ့တာတှမေရှိဘူး”လို့ နောကျထပျအလုပျထုတျခံလိုကျရသူ တဈဦးကပွောပါတယျ။…
အလုပျထုတျခံရတဲ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့ ပွောပွခကျြနဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာရေးသားတငျခဲ့တဲ့ post မှာပါဝငျခဲ့တဲ့ အ ကွောငျးအရာတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ food panda Myanmar ကုမ်ပဏီဘကျကို duwun ကဆကျသှယျမေးမွနျးတဲ့အခါမှာ အခုလို ပွနျလညျ ဖွကွေားပါတယျ။….
“မကွာသေးခငျက ဖွဈသှားတဲ့ rider ယာဉျတိုကျမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ကြှနျတျောတို့လညျး မြားစှာ စိတျမကောငျးဖွဈရပွီး ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ အတတျနိုငျဆုံး ကူညီထောကျပံ့မှုတှကေို ပွုလုပျပေးခဲ့ပါတယျ” လို့
food panda Myanmar မှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ဆိုပါတယျ။ဒါ့အပွငျ အလုပျထုတျလိုကျတဲ့ ဝနျထမျးသုံးဦးနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး အဆငျ့ဆငျ့သခြောစဉျးစားပွီးမှ ဆုံးဖွတျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဖွကွေားပါတယျ။…
“ဒီဖွဈစဉျဖွဈပှားပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့လညျး post တငျခဲ့တဲ့ rider ကို လူခငျြးတှခေဲ့ပါတယျ။ အဓိကကတော့ ကုမ်ပဏီဖကျက လုပျဆောငျပေးခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျနဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာ ပွနျ့နှံ့နတေဲ့ ဖွဈရပျကွား မတူညီကှဲပွားခကျြတှေ တှရေ့တဲ့အတှကျ အခုလို တှဆေုံ့မေးမွနျးခဲ့တာပါ။
နောကျပွီး ကြှနျတျောတို့ဘကျက လုပျဆောငျခဲ့တာတှကေို ပွောပွခဲ့ပွီး rider တငျထားတဲ့ပို့ဈမှ မမှနျကနျသော အခကျြမြားကို ပွောပွပေးခဲ့ပါတယျ။…
ဒီလိုပွောပွပေးခဲ့ပမေဲ့လညျး rider အနနေဲ့ မှားယှငျးတဲ့ သတငျးကို ဆကျလကျဖွနျ့ဝနေခေဲ့ပါတယျ။ အသေး စိတျစုံစမျးစဈဆေးကွညျ့တဲ့အခါမှာ ဒီ rider မြားအနနေဲ့က
အခုလိုမြိုး ကုမ်ပဏီကိုထိခိုကျစတေဲ့ မမှနျမကနျ ရေးသားမှုမြိုး အရငျကတညျးက ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့အဆငျ့ဆငျ့ စဉျးစားပွီး rider နဲ့ လကျ တှဲဖွုတျလိုကျရခွငျး ဖွဈပါတယျ” လို့ ဆိုပါတယျ။…
အလုပျထုတျခံရတဲ့ rider တှနေဲ့ ကုမ်ပဏီကွားမှာ ဆကျလကျညှိနှိုငျးတာမြိုးမရှိတော့ဘဲ rider တှဘေကျက အလုပျလုပျစဉျအတှငျး ကုမ်ပဏီကထုတျပေးထားတဲ့ food box တဈလုံး၊ ယူနီဖောငျး ၃ထညျနဲ့ ဦးထုပျ ၁ လုံးတို့ကို နိုဝငျဘာလ ၂၂ ရကျနကေ့ သှားအပျထားပွီးဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။…
ကုမ္ပဏီရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လူမှုကွန်ရက်မှာ မျှဝေခဲ့တဲ့ foodpanda ဝန်ထမ်း (၃)ဦး အလုပ်ထုတ်ခံရ
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ foodpanda rider တစ်ဦးရဲ့ post ကို ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှာ ပြန်လည်ဝေမျှခဲ့တဲ့
rider (၃)ဦးကို food panda Myanmar ကုမ္ပဏီက အလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဆီကနေ သိရပါတယ်။…
“ လုံးဝအထုတ်ခံလိုက်ရပြီ။ အခုလိုထုတ်တာကြီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ထမင်းအိုးကိုရိုက်ခွဲလိုက်သလိုပဲ။ ချက်ချင်းကြီး ထုတ်တယ်ဆိုပြီးလုပ်တာ။ အမှန်ဆို အလုပ်စလုပ်ကတည်းက သူတို့စည်းကမ်းချက်ထဲမှာလည်း ပါပြီးသား။
ဝန်ထမ်းတွေ တစ်ခုခုအမှားရှိခဲ့ရင် ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်ဆိုပြီး သတိပေးချက်မျိုးရှိရမှာ၊ အခုဟာက တစ်ခါတည်းဖြုတ်တယ်ဆိုတာက လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး။…
လုပ်လာခဲ့တဲ့ တလျှောက်လည်း ဘာပြစ်ချက်မှမရှိဘူး။ customer တွေနဲ့ ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေ Facebook မှာ ရေးတင်တယ်ဆိုတာလည်း တကယ်ဝန်ထမ်းတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေပဲ ကျန်တဲ့သူတွေမေးကြည့်လည်းရတယ်။
ဒါကို ကုမ္ပဏီဘက်က မဖြေရှင်းပေးဘဲ အလုပ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးကျတော့ လုံးဝမကျေနပ်ဘူးဗျာ”လို့ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ rider တစ်ဦးက Duwun ကို ပြောပါတယ်။…
အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ riderတွေအနေနဲ့ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့က ကုမ္ပဏီရဲ့ တာဝန်ရှိသူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပေမယ့်လည်း အလုပ်ထုတ်လိုက်ကြောင်း အဖြေသာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။“
မူရင်း postတင်တဲ့သူက fake အကောင့်နဲ့ တင်လိုက်တာ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့က copyယူပြီး ကိုယ့်အကောင့်တွေမှာပြန်တင်လိုက်ကြတာပါ။…အခုထုတ်ခံရတဲ့ (၃)ယောက်မှာ မူရင်း postတင်တဲ့သူမပါဘူး။ ပြန်ကူးတင်တဲ့သူတွေပဲ။
ကျွန်တော်တို့ကလည်း သူတင်ထားတာတွေက ကိုယ့်ခံစားချက်တွေအတိုင်းပဲ လက်တွေ့လည်းအဲလိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ အမှန်ကိုဖော်ပြတဲ့သဘော။ တကယ်လည်း ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတာဝန်ယူမှုမှမရှိဘူး။…
ကျွန်တော်တို့ riderတွေထဲက တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတောင် riderတွေအားလုံးပဲစုပြီး ကိုယ်တက်နိုင်သလောက် ၁၀၀၀ ဆီစုပြီး ပြန်ထောက်ပံ့နေကြရတာ။ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ကာလတွေတစ်လျှောက်လည်း ဘာမှကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တာတွေမရှိဘူး”လို့ နောက်ထပ်အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရသူ တစ်ဦးကပြောပါတယ်။…
အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပြောပြချက်နဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားတင်ခဲ့တဲ့ post မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အ ကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ food panda Myanmar ကုမ္ပဏီဘက်ကို duwun ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ အခုလို ပြန်လည် ဖြေကြားပါတယ်။….
“မကြာသေးခင်က ဖြစ်သွားတဲ့ rider ယာဉ်တိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့လည်း များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်” လို့
food panda Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် အလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဝန်ထမ်းသုံးဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အဆင့်ဆင့်သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါတယ်။…
“ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း post တင်ခဲ့တဲ့ rider ကို လူချင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကုမ္ပဏီဖက်က လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြား မတူညီကွဲပြားချက်တွေ တွေ့ရတဲ့အတွက် အခုလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာပါ။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဘက်က လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကို ပြောပြခဲ့ပြီး rider တင်ထားတဲ့ပို့စ်မှ မမှန်ကန်သော အချက်များကို ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။…
ဒီလိုပြောပြပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း rider အနေနဲ့ မှားယွင်းတဲ့ သတင်းကို ဆက်လက်ဖြန့်ဝေနေခဲ့ပါတယ်။ အသေး စိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီ rider များအနေနဲ့က
အခုလိုမျိုး ကုမ္ပဏီကိုထိခိုက်စေတဲ့ မမှန်မကန် ရေးသားမှုမျိုး အရင်ကတည်းက ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့် စဉ်းစားပြီး rider နဲ့ လက် တွဲဖြုတ်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။…
အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ rider တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီကြားမှာ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိတော့ဘဲ rider တွေဘက်က အလုပ်လုပ်စဉ်အတွင်း ကုမ္ပဏီကထုတ်ပေးထားတဲ့ food box တစ်လုံး၊ ယူနီဖောင်း ၃ထည်နဲ့ ဦးထုပ် ၁ လုံးတို့ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က သွားအပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။…
လြှပျစဈခရီးသညျတငျကား(E Bus)တှေ ပွညျတှငျးဈေးကှကျမှာ ထုတျလုပျဖွနျ့ခြိနိုငျဖို့ စီစဉျနဟေုဆို